Nzọputa ohuru emere maka ndị nwere nkwarụ na ndị okenye | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraNtọala ọhụụ ewepụtara maka ndị ọlụsị na ndị okenye
27 / 04 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Isi akụkọ, Turkey
E tinyela usoro ọhụrụ maka ndị nwere nkwarụ na ndị agadi
Onye na-ahụ maka ezinaụlọ, ndị ọrụ na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ Zehra Zümrüt Selçuk kwuru na ha ewerela usoro ọhụrụ iji chebe òtù ndị jikọtara ya na General Directorate for Dis nkwarụ na Ndị Okenye si na COVID-19.
Minista Selçuk kwuru na a kwadebere Director General nke Nkwarụ na Ndị agadi na-eduga na mpaghara niile site na Ntuziaka Ozi Coronavirus 2 maka ndị otu; Dị ka ọnwa asaa nke ọnwa Jenụwarị 7, anyị emeela ngwa ngwa ihe niile dị mkpa n'ọgụ megide coronavirus. Anyị akwadebewo nduzi nke abụọ banyere akpachapụ anya na usoro ndị kwesịrị iwere n'ụlọ ọrụ anyị iji kpuchido ahụike nke ndị okenye na ndị ọrụ n'ụlọ ebe a na-elekọta ndị agadi. N'ihi ya, anyị achịkọtala ihe anyị tụbara na ntuziaka a. ” o kwuru.
Nnwale COVID-19 maka ndị ọrụ
Dabere na Ntuziaka Ozi Coronavirus ọhụrụ a kwadebere ma zigara ndị otu ahụ site n'aka General Directorate maka Ndị Nwere Nkwarụ na Ndị Okenye, a na-arịọ nnwale COVID-14 maka ndị ọrụ mpụga ọ bụla n'ime oke nke usoro ụbọchị ịgbanwere.
Ndị ọrụ, "Onweghị ihe egwu dị na COVID-19." Have ga-abanye n’ime nzukọ a nwere akwụkwọ nwere nkebi ahịrịokwu wee jiri akara aka "NR", nke pụtara "Enweghị ike itinyegharị."
Igosiputa ihe mmuta
N'ime akwụkwọ ntuzizi nke Director General duziri, achọrọ ya igosipụta mkpa mmetụta nri dị n’etiti ndị na-anọ n’ime nzukọ. A ga-akwadokarị protein na vitamin C ka ha na-ahazi ndepụta nri, ọkachasị ndị agadi nwere ọrịa shuga.
A ga-enye ndị otu ya achịcha emechiri emechi kama achịcha mepere emepe. Ndị otu agaghị enwe ike ịtụ nri ma ọ bụ mkpụrụ si n'èzí. Iburu ngwongwo ga-ebelata ma chefuo ya na nchekwa ma kporo ya na nzukọ.
Ndị ahụ nọ n'ọgbakọ dị na-agwa Video ezinụlọ ha
N'ime ntuziaka ahụ, a gwara ndị agadi na ndị nwere nkwarụ na-anọ na òtù ndị ahụ ka ha jụọ ndị ezinụlọ ha ajụjụ ọnụ site na ekwentị vidiyo.
Emere Ọpụpụ Social, Emebisị Ihe Ndị Ewupụtara na Ilọ Ọha na Ọha
N’aka nke ọzọ, nkọwapụta dị ka Social Isolation Rooms, Social Isolation Floors na Social Isolation ụlọ kọwara kọwara na ntuzi aka nke ugboro atọ.
N'ime ntuziaka izizi nke Onye Isi Ochie maka Ndị Nkwarụ na Ndị Ọrụ Okenye kwadebere, ọtụtụ mkpebi ka etinyere n'ọrụ na ụlọ ọrụ ọ bụla, na ikpe ahụ zigara ikpe ikpe n'ụlọ ọgwụ na enyo COVID-19, ebe ekwuputara ebe dị mkpa dị ka Organizationtù Ahụ Ewu. N'ọnọdụ a, e guzobela Ilọ Mgbakọ Njikọ iji chebe ndị agadi na ndị nwere nkwarụ. Ndi otu ndi anabatabeghi dika ndi okenye, nke atumatu iha imeghe ohuru bu ndi emebere onwe ha dika ndi eweputara ma obu ndi achuputara.
Na mgbakwunye, na ntuziaka nke abụọ, ekwusiri ike na ndị agadi / ndị nwere nkwarụ nọ n'ụlọ ọgwụ maka ihe ọ bụla bu ihe apụrụ iche maka ụbọchị 14 mgbe ịhapụchara ya.
Ingnọ otu ime ụlọ mgbe ọ bụla o kwere omume
A na-ebugharị ndị agadi ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ n'ime ụlọ ndị ahụ n'otu ọnụ dị ka o kwere mee. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, edoziri ime ụlọ ndị ahụ ka ọ bụrụ mita 2 kwa akwa.
Site n'enyemaka nke eserese ndị ọzọ, ahụ ọkụ ahụ, ọsụsọ, ụkwara ụkwara na usoro iku ume nke ndị agadi na-aga n'ihu.
Ime na nkwekọrịta Nsonaazụ Ntinye
E tinyekwara 'Nchọpụta Nsonaazụ Ozi nke Ozi Ahụike bipụtara na mmemme ndị a. Ndị ọrụ nlekọta nọpụrụ ndị ọrụ ndị ọzọ maka enyo ha enyo maka ọrịa. Ọ bụrụ na onye uwe ojii ahụ chọpụtara na COVID-19 ziri ezi, a ga-ekepụ ya ụbọchị iri na anọ.
N'aka nke ozo, oburu na achoputa ihe mgbaàmà nke COVID-19 na nlebara anya, ndi nwere nkwarụ na ndi agadi, o kewapu ya na ndi ozo. Mgbe enwere ike ikpe, a na-egbochi ngalaba ahụ.
Ministri mekwara nhazi na ngalaba niile iji nye ọrụ ndozi maka nsogbu mberede dịka 'chọta', 'gbahapụ' n'ụlọ ọzọ, tinyekwa ọgwụ ndị ejiri na ọgwụgwọ COVID-19 na ndepụta nkwụghachi ụgwọ nke SGK.
Malatya Ngwaputa maka Ngbanwe maka ndi nwere nkwarụ na ndi okenye
Ndị nwere nkwarụ, ndị okenye na ndị nke dị ime na Samsun nwere oche oche anụnụ anụnụ na sistemụ Rail Sisun
Ogbugbu nke ọkwọ ụgbọ okporo ígwè na Ukraine na ndị agadi nwere nkwarụ (Video)
A na-ebipụta Iwu ahụ maka ikike izipu njem maka onye nkwarụ na okenye
Oge Visa maka ndị agadi na nkwarụ Denizli Kaadị
"Ka ndị ahụ nwere nkwarụ jiri nkwarụ, ndị agadi na ndị na-ahụ maka ụmụaka"
Oge Visa na Denizli Kaadị maka Ndị Agadi na Ndị Nkwarụ
Ndị na-eto eto na ndị agadi nọ na-ahọrọ YHT
Nchoputa di omimi banyere COVID-19
Ntuziaka Ozi Coronavirus
Ingslọ Ndị Nlekọta Ọha
Ndị na-ahụ maka nchekwa ọha
Ilọ Ọha na-elekọta mmadụ
Taa na akụkọ ihe mere eme: 24 May 1924 nke ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ na-ejikwa
Onye agadi nwoke nwụrụ n'arụ ụgbọ okporo ígwè ohi zuru ezu afọ abụọ gara aga
Egosirila usoro eji abanye ala n'ọdụ ụgbọ elu Sinop